xasuuso reeb iyo xasuuqii magaalada Ayshaca 12/08/1960 kii – Xeernews24
xasuuso reeb iyo xasuuqii magaalada Ayshaca 12/08/1960 kii
Odeyga sawiirkan ka muuqda waa adeero;Xaaji Cali Dugsiiye khayre(89 jir) wuxuu ka mid ahaa dadkii tirada yaraa ee sidda mucjisada ahayd uga badbaaday xasuuqii Ayshaca.
Waqtigaas wuxuu ahaa ganacsade badeeco kala duwaan magaalada keena kuna lahaa meherad(tukaan) da’diisuna waxay waaga ahayd 30 jir wuxuu lahaa xaas iyo 3ddex caruura.
Sidda uu xaajigu noo sheegay waxaa amarka xasuuqa bixiyay Boqor Haylasilaase oo markaa magaalada Diridhaba joogay waradaha guudoomiyaha waxaa la odhan jiray KAASAA MUKRE.oo aha ka shacabkii reer Ayshaca ciidanka ku xasuuqay.
Lacagtan waa lacagtii boqor Hayle silaase(1931-1974) waa 1:85 santim oo dhigma 150 birr oo hadda ah lacagtan waxaa laga helay xaynka ama jeebka haweenay ka mid ahayd dadkii xasusuuqii lagu dilaye oo guri ku dhex aasnayd markii dib loo faqay qabuurti loogu aasayay ayaa lacagtan laga helay.
Haweenaydan oo oo sidda la sheegey reer miyi magaalada usoo safartay ahayd oo magaceeda la garanayn balse odayadii xiligaa noolaa ay noogu sheegeen in ay ahayd (ina Obsiiye Mijacase) oo aabaheedna iyada kadib wuu magaalada Dirdhaba dargigu uu ku dilay Sannadkii 1977kii.
Maxamuud Dirir Rooble (jabaqaale).
todobaadkan ayaay ahayd markii aan soo dhigay sawirkan adeero Maxamuud oo nabuur waawayn ku yaallaan jidhkiisa kuwaas ay ka soo gaadhay xasuuqii magaalada Ayshaca.
Balse waxaa iga soo codsaday qaar caruurtiisa ka mid ah in aan sawirkaas ka saaro maadaama uu qarqarka sare qaawanyahay anna waan ka aqbalay inkasto ay iga ahayd in aan bulshada la wadaago sida waxshinimada leh ee xabbadda loogala daalay.
Kadib waxaan jeclaystay in aan nila wadaago sawirkiisan oo gabadh uu dhalay ay iisoo dirtay.
Maxamuud markii xasuuqu dhacay 26 sanno jir buu ahaa maantana waa 86 jir.
Nuur Hasan Jama
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/09/Ayshaca-xasuuqi.jpg 674 1080 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-09-08 08:22:102019-09-08 08:22:10xasuuso reeb iyo xasuuqii magaalada Ayshaca 12/08/1960 kii
Dowladda oo Bogaadisay Abaal-marinta la siiyay Xawaaladda Taaj (Daawo Sawirada... Waa Dhalinta reer Cosob(Cundhufo) oo isku Xilqaamay iskood in ay wax qabsad...